Plasta - Henan Kol Research Keming Mechanical Co., Ltd.
Plasterer si aga-eme
Kwesịrị ngo esesịn ọnọ niile akpa nke Gypsum plaster na ga-mkpa, nakwa dị ka ọ bụla mpụga ọkọnọ nke mmiri ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ na-adịghị ma ejikọrọ. The plasta arụ ọrụ kwesịrị ime ka ha onwe ha ngwá ọrụ na ngwá na mgbe ụfọdụ na-enye ha onwe ha bead.
The aga-eme na plasterer a na-emekarị na-atụ anya ga-arụzu.
The plasterer emekarị ga akpa staple ma ọ bụ tak Cornerbead jidesie bụla protruding (mpụga) n'akụkụ nke ime nke ulo. Care ẹka iji jide n'aka na a na-eme ka mgbidi anya ogologo na ọzọ bụ nke a nkà anya karịa ihe ọ bụla ọzọ.
"Bead" na-abịa na ọtụtụ ekwekọghị; Sitere na na waya ntupu mmasị site staples ka arọ metal akara ule dị mkpa ka a tacked na na ntu. Plastic iche nwekwara adị.
The bead ga-tụrụ na bee na size; elekọta ẹka bụghị ehulata ma ọ bụ hie ya. N'ebe ihe karịrị otu akuku osobo; na bead si nsọtụ na-ebipụ na n'akuku na 2 ma ọ bụ karịa Atụmatụ na-enịm dị ka nso ọnụ dị allowable; emetụ ma ọ bụghị overlapping. The bead kpamkpam kpuchie plaster nakwa dị ka ike nke mgbidi na plaster-enyere jide ya ike. The okokụre ngwaahịa doo naanị a obere gụrụ metal warara na protrusion nkuku nke ego n'anya kpuchie mgbe mgbidi na-ese. Nke a doo a dị ọcha, ogologo-achọ akuku.
Otu ọzọ usoro hụrụ na ndị okenye ụlọ akpụ a ahazi ma ọ bụ bullnosed nkuku eji a quirked osisi mkpara bead. Ndị ọrụ bead, a 1 inch dowel na approx 1/3 kpụchara azụ, na-enịm ke mpụga nkuku site joiner na site, kpọgidere osisi plọg setịpụrụ n'ime brick / ngọngọ seams, ma ọ bụ na osisi eku. Plasta na-ọsọ ka mkpara bead na mgbe ahụ bee azụ na mpaghara na bead ma ọ bụ "quirked" zere a na-adịghị ike nku ihu ebe plaster-ezukọ na bead.
Na ije a quirk bụ a obere 'V' ekara ọwa eji ikpuchi na-enye enyemaka a convex ahazi ịkpụzi. Ka ịmepụta techie akuku, akwado uwe (browning) na-techie ruo mkpara bead, mgbe ahụ quirk na-bee n'ime akwado uwe a obere buru ibu karịa okokụre size. Mgbe n'elu skimming uwe na-etinyere, ọzọ bead a n'ụzọ zuru ezu skimmed na na, na, na-eji a ogologo onu, na quirk na-re-ebipụ ka okokụre omimi, na-emekarị na ihe ndika 45 ogo n'akuku n'ime bead. The quirk ga zoo omume obere mgbape ga-etolite n'etiti mkpara bead na plaster.
The plasterer kwesịrị jupụta a 5 lita ịwụ partway na mmiri. Site na nke a ịwụ enye hangs ya trowel ma ọ bụ trowels na ebe n'ime ya dị iche iche na ngwaọrụ.
Nọmalị a plasterer nwere otu trowel maka "ibikwasị" (usoro nke ịtụkwasị apịtị gbaa mgbidi).
Ụfọdụ mgbe, na-okenye trowel nwere ezigbo gbagọrọ agbagọ na ya (banana usoro) na-eji maka nzube nke "texturing"; ma ọ bụrụ na a na-akpọ n'ihi na homeowner. A nkịtị-on trowel nēche na-oke ewepụghị a na agụụ mere site mmiri nwere ike arapara ya na mgbidi ahụ, na-amanye ya gbapụta ya ma si otú o nwere rework ebe.
N'ikpeazụ, otu onye nwere ike nwere a ohuru trowel "dịghị ma agbajikwa-na" nke ọ ga-eji maka "egweri"; nke a bụ mgbe ndị plaster na-fọrọ nke nta ka obi tara mmiri na na ọ na-ewepụ ihe ọ bụla bumps ma ọ bụ na-ejuputa na ọ bụla obere dips (cat chere ihu) iji mee ka mgbidi anya dị ka a edo mpempe akwụkwọ nke kenkowaputa ọcha plaster.
Kasị plasterers nwere onwe ha mmasị maka size nke trowel ha na-eji. ụfọdụ eji trowels dị ka nnukwu dị 20 sentimita asatọ ogologo ma na-ahụkarị na o yiri ka a 16 "× 5". M ahụmahụ ka mma ika bụ a Marshalltown igwe anaghị agba ígwè. Ha nwere a brassy luster ha, a roba ahụ na agaghị olulu ma ọ bụ nchara na-adịghị ma ọ bụrụ na mmadụ na mberede hapụrụ na mmiri n'otu ntabi anya mgbe ndị ọzọ na-ahọrọ a mgbe nile na-ezu ohi trowel nke na-achọ ihe mmezi ma dịruru n'ihi na ezi a ogologo oge na pitting nwere ike inye ya a " ịta "na-enyere aka mgbe" gụchara "(ikpeazụ ngafe mgbe plasta na-mwube).
N'ime ịwụ nwekwara aga a nnukwu ahịhịa eji ikwommiri mmiri gbaa mgbidi na ọcha ya ngwaọrụ, a na agba ahịhịa maka larịị nkuku, na a akuku nnụnụ maka akpụ nkuku (ezie na ọtụtụ ndị otu ezigbo nnụnụ na-ụlọ adabako).
Ndị a ngwá ọrụ na bọket na-mbụ nọ nso mix table na mgbe dị ka plasta amalite ka na-akpali nso mgbidi na a na-arụ ọrụ na. Oge na-aghọ a ihe na-akpata n'ebe a dị ka ozugbo plaster amalite kwesie (set) ọ ga-eme otú pụtara ngwa ngwa na plasterer nwere a obere oke nke njehie na-mgbidi ire ụtọ.
Na na Ịgwakọta table nke plasterer-emekarị na-esetịpụrụ ya "egbe" n'ihi ya, ọ ga-eru ya ngwa ngwa mgbe o kwesịrị jidere ya na idebe unyi anya nke ya. Ọ bụla irighiri na plaster pụrụ ịghọ a isi mmekpahu.
Plasta n'elu ma ọ bụ ala ala?
Plasterers ga a na-eke ihe a ụlọ, (karịsịa a nnukwu ma ọ bụ elu-ceilinged mgbidi) n'ime elu na ala. The otu na-arụ ọrụ n'elu ga-eme si n'uko nke onu banyere n'afọ elu na-arụ ọrụ a na mmiri ara ehi crate maka 8-ụkwụ (2.4 m) n'uko, ma ọ bụ na-arụ ọrụ anya stilts maka 12-ụkwụ-elu ụlọ. N'ihi na katidral uko ụlọ ma ọ bụ dị nnọọ elu mgbidi, ikpo a guzobere na otu na-arụ ọrụ topside, ndị nke ọzọ n'ihu n'okpuru.
Hichaa tupu ha rụchaa ọrụ
A-eme na ọrụ. Ọ dịghị plaster globs ekpe na ala, mgbidi ma ọ bụ n'akụkụ bead n'ọnụ ya. (Ha ga-egosi ma ọ bụrụ na-ese na-egbochi flooring na ewepụtụ). Wepụ ma ọ bụ neatly tojupụtara niile ahịhịa.
All ụlọ na mgbidi na-nyochara maka cracking na kụkpọrọ ụgbọala ma ọ bụ scratches na ike ka e mere site n'aka ndị ọzọ bumping n'ime mgbidi. Ha na-na-nyochara iji jide n'aka na ọ dịghị bumps na-ekpe na mgbidi si splashed plaster ma ọ bụ mmiri. All ụlọ na-enyocha iji jide n'aka na niile plaster na-kụrụ aka nke outlets otú ahụ ka ọkụ eletrik nwere ike wụnye sockets na iji jide n'aka na ọ dịghị ngwá ọrụ na-hapụrụ. Nke a doo mgbidi njikere maka ese na finishers bata ime ha ahia.
Interior plasta usoro
The n'ụlọ nwe na plasterer si onyeisi ga na-emekarị na-ekpebi tupu uwe ha ga-eji nọ n'ụlọ. A mgbidi ndị ire ụtọ na mgbe ụfọdụ, uko ụlọ. Na-emekarị a homeowner ga-ahọrọ ka nwere uko ụlọ iji a "udidi" Usoro dị ka ọ bụ nnọọ mfe, ngwa ngwa, ma si otú ọnụ ala karịa a ezigbo n'uko.
The plasterer ruturu ahịa dabeere na usoro a ga-eji na osisi ụkwụ kpuchie na ngo ma ọ bụ homeowner tupu ọrụ amalite. The osisi ụkwụ na-enwetara site na hangers ma ọ bụ na-eme atụmatụ site isi subcontractor site agụta wallboards na-abịa na ihe ụlọ ọrụ ọkọlọtọ nke 8 '12' ogologo. O kwukwara, sị na extra mmefu soffits na katidral uko ụlọ.
N'uko abụọ ma ọ bụ mbụ
A ma ọ bụrụ na n'uko bụ na-eji ire ụtọ na ọ na-eme na mbụ, tupu mgbidi. Ọ bụrụ na ọ bụ na-textured, ọ na-eme mgbe mgbidi.
Ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ mgbe mgbe a n'uko a na-arụ ọrụ na plaster ga-ada na ikwommiri n'elu mgbidi. Otú ọ dị a udidi mix na-adịghị mkpa ka larịị mgbe ọ na-amalite ka:
otú a retardant dị ka "Ude nke tartar" ma ọ bụ sugar ga-eji ogologo ọnọdụ oge, na-adị mfe kpụchasịrị anya mgbidi.
na ebe ọ bụ na oge ọ bụghị dị ka igbochi nke a na-akpata na textured uko ụlọ a nnukwu mix, ma ọ bụ azụ na-azụ mixes nwere ike mere na ihe niile uko kpuchie n'otu oge.
ọzọ kpatara ya bụ na a na nnunu a na-emekarị na-agba ọsọ, tinyere n'elu nkuku mgbe eme a ezigbo n'uko, mgbe ahụ, ọ bụ mfe ịnọgide na-enwe a onu site n'ime mgbidi ikpeazụ. Ma a textured n'uko ejikari adịghị mkpa ka a birded, naanị blended na na a nnọọ mmiri agba ahịhịa. Na nke a na mgbidi a na-eme mbụ na nkuku kpụrụ na nnunu.
Ihe mbụ ndị plasterer nēche ime bụ gaa niile ntupu-taped seams mgbidi ọ bụ banyere na-ekpuchi; na a nnọọ mkpa swatch. The wallboard adọta mmiri nke a warara otú ahụ mgbe plasterer aga n'elu ya ọzọ mgbe na-eme na ike nke mgbidi, ọ ga-ahapụ onye na indented onuete na kwesịrị n'ihu reworking.
O jupụtara n'ime ke ebe nso n'uko otú ọ ga-enweghị ka ọ gbatịa aka iru ya n'oge ndị ọzọ nke mgbidi; Ọ Nleta nkuku ya nnunu. Nke a na-azọpụta ọtụtụ ihe dị mkpa oge dị ka usoro a bụ a agbụrụ megide chemical mmeghachi omume.
Site mix table nke plasterer Scoops ụfọdụ "apịtị" n'elu center nke ya egbe na ya trowel. Na-ejide egbe na ya anya-n'aka-ya trowel na ya bụ isi na plasterer mgbe Scoops a bulging mpịakọta plaster jidesie ya trowel. a na-ewe a bit nke omume-nwe, karịsịa na soupy mixes.
Mgbe ahụ na-ejide trowel yiri mgbidi na na a nta n'akuku nke nkwojiaka ọ gbalịrị uniformly tụgharịa plaster gbaa mgbidi. Na a n'ụzọ yiri a squeegee. Ọ na-amalite banyere ihe inch n'elu n'ala na-arụ ọrụ ụzọ ya elu ka n'uko. Care ẹka na-edo ka o kwere ka ọ na-enyere na finishing na-adọ.
Ịkụ Aka n'Ọnụ Ụzọ ala
Dabere na ọnọdụ oge nke plaster. ozugbo mmiri nke plaster amalite mmasị site na osisi a abụọ ngafe e mere. a na-akpọ na-akụ aka ala. ọ bụ ọtụtụ ihe dị ka itinye agba na a ala na nkwojiaka edinam na nzube. na-eji ire ụtọ ọ bụla edoghi ma jupụta na ọ bụla isi voids ga-eme ka mmezi ọrụ ozugbo plaster amalite n'ezie setịpụrụ. obere nsogbu na-etinyere na trowel na-nọ na dịtụ ewepụghị kwupụta mgbidi.
Mgbe ụfọdụ ihe accelerant ga-atụkwasịkwara a mix na ngwa ngwa oge na-egbu oge site na mbụ Ịgwakọta na-adọ aka mgbe plaster amalite setịpụrụ. Nke a na-ejikarị eme oyi ụbọchị mgbe ọnọdụ bụ na-egbu oge ma ọ bụ n'ihi na obere ọrụ iwelata anwu.
Ozugbo plaster bụ na mgbidi na-amalite ka (a nwere ike kpebisiri ike site table na-eme ụzọ), na plasterer gingerly fesara mmiri gbaa mgbidi; a na-enyere aka uloanumaanu ọnọdụ na ike a ileghara. O wee na-eji ya trowel na mgbe a wetted chere ahịhịa ẹkenịmde na-abụghị n'aka na ejighị ya kpọrọ emetụ mgbidi n'ihu nke trowel na-arụ ọrụ a ileghara n'ime ihe ọ bụla obere gaps (mara dị ka "catfaces") na plaster nakwa dị ka larịị ike ike dina-na iha aha ọ bụla ikuku egosipụta na kpụrụ n'oge mwube.
Nke a bụ a dị oké mkpa n'ihi na ọ bụrụ na mgbidi ọkọkpọhi kwa ike ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume jupụta na bụla gaps ka ileghara agakwaghị setịpụrụ na mgbidi na ga kama dị nnọọ akọrọ na dapụ. Nke a na-eduga ná mkpa nke ihe a na-akpọ "egweri" dị ka otu onye ga-aga n'elu ike mgbidi ọzọ na ọzọ na-agbalị larịị obi tara mmiri mgbidi na bụla isi catfaces ga-ejupụtakwa na na a ngwe putty, nkwonkwo compound, ma ọ bụ reworked site agakọ na a ọhụrụ, na mkpa uwe.
The okokụre mgbidi ga-ele anya kenkowaputa na uniformly ewepụghị na bụ ezigbo na aka. Mgbe ụbọchị ole na ole ọ ga-aghọ chalky-acha ọcha na ike mgbe ahụ ga-ese n'elu.
Site n'oge na akpa na-kposara n'ime barel mgbe mgbidi kpamkpam ka a na-akpọ a mix. Mgbanwe na Usoro e ji mee na ma accelerant ma ọ bụ retardant na kwukwara, a mix a dịruru banyere awa abụọ.
The ikpeazụ oge ndị kasị frantic ma ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo ma ọ bụ ma ọ bụrụ na mix na-esetịpụrụ ọsọ karịa na-atụ anya. Ọ bụrụ na nke a mere na ọ bụ kwuru na mix ka "gbajie" na kwesịrị ruru ka eji ochie ngwaahịa ma ọ bụ iche iche nke ihu igwe (iru mmiri ma ọ bụ na-ekpo ọkụ ụbọchị nwere ike ime ka plaster ka quicker). Nọmalị nanị atọ ma ọ bụ anọ mixes na-eme na a ụbọchị dị ka plasta bụ nnọọ agwụ ike na ọ bụghị dị ka irè n'okpuru-ekwekọghị n'okike ọkụ na ọnwa na n'oge mgbede.
plasta a na-eme n'afọ ma pụrụ iche nsogbu nwere ike oge oge. N'oge okpomọkụ, okpomọkụ nēche ime ka plasta ka ngwa ngwa. The plaster nwekwara site ya okpomọkụ na ụlọ nwere ike nnọọ hellish. A na plaster arụ ọrụ ga na-agbalị na-abata n'ụlọ ọma tupu chi ọbụbọ.
N'oge oyi ọnwa, obere ụbọchị ime ka ọ dị mkpa nke mụọ ọkụ. N'oge ụfọdụ akụkụ ndị a ọkụ pụrụ ime ka ọbụna ndị smoothest mgbidi anya dị elu nke ọnwa. Ọzọ nsogbu ke ini etuep ọnwa na-akpa iji propane ugboelu heaters (nke nwere ike n'iku plasta acha ma adịghị ma na-afụ ụfụ ya), ọ bụghị naanị na-plasterers ọkụ ma na-na-gbochie mmiri na mix ịnwụ n'oké na ha na ice kristal tupu plaster nwere oge ka. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na mmiri sooks na-adịghị juputara drained tupu ịhapụ ya nwere ike ifriizi n'elu abalị na-kpamkpam kwụsịrị ke usenubọk.
Texturing na-emekarị debeere closets, uko ụlọ na ụgbọala mgbidi. [Tikeeti mkpa]
A a retarding gị n'ụlọnga na-agbakwunyere na mix. a bụ ejikari Ude nke Tartar (ma ọ bụ "dope" na plasterer si jargon) na-elekọta ga-iwere na ego kwukwara. Ukwuu na mix nwere ike mgbe atọrọ na niile. Otú ọ dị ego eji na-eme atụmatụ na; ọtụtụ ihe otu na-agbakwụnye a gbaara nke nnu a Ntụziaka. ị tinye a obere scoop nke retarder, dabere na size nke mix. Retardant na kwukwara ka ibu mixes nwere ike, ebe ọ bụ na udidi Usoro adịghị achọ onye-echere ruo mgbe ọ na-amalite debere n'ihu na-arụ ọrụ ya.
The nkịtị-on-adọ bụ otu ihe ahụ dị ka ire ụtọ ma ọ na-kwukwara na a thicker uwe. Ozugbo uwe bụ na uniformly na plasterer-aga azụ na nnụnụ ya na nkuku. Ịnọgide Na-adị n'ebe nkuku ọ na-akawanye a trowel na a mma banana usoro na ọ na-amalite na-agba ọsọ ya n'elu mgbidi na a na ọnụ ọgụgụ na asatọ ma ọ bụ ESS ụkpụrụ, na-eme n'aka na-agafe ebe niile dịkarịa ala otu ugboro. Ọ na-agbakwụnye a obere mmezi plaster ya trowel ma ọ dị mkpa. The n'ozuzu mmetụta dị n'ígwé nke agba-dị ka bibiri akụkụ ofụri nke n'uko ma ọ bụ mgbidi. O nwere ike mgbe ahụ dị nnọọ pụọ ka ọ na-eji na-elekọta e bụghị kwa-ahapụ ọ bụla globs na iji jide n'aka na nkuku anya ire ụtọ na linear.
Ọ bụrụ na a mgbidi bụ na-eji ire ụtọ na n'uko textured, a na mgbidi a na-eme na mbụ, mgbe ahụ n'uko mgbe mgbidi emenịm. Kama rebirding n'uko (nke ga-e mere mgbe mgbidi tọrọ on), a dị ọcha trowel ẹkenịmde mgbidi na ya n'akụkụ a na-agba ọsọ, tinyere n'uko ka "bee ya na" ma hichaa mgbidi n'otu oge. Nke a akara-ahụ larịị na a paintbrush ime ka mgbanwe enweghị nkebi.
The ogbo (nyochawa akpọ a n'elu mmiri), nwere a gburugburu ụdị na ike ike n'elu. ọ bụ ofu ka a na-akwado na a Central handhold na bụ Olee ihe enyemaka size of a ọkọlọtọ trowel. Ogbo bụ a variant udidi na Usoro na-eji na-ejikarị na uko ụlọ na mgbe ụfọdụ na closets. A mgbe eji a ogbo; ájá na-agbakwunyere na mix na Usoro a na-akpọ ájá-ogbo.
Care ga-a ghara iguzo na n'okpuru gị trowel mgbe na-eme nke a dị ka ọ bụ nnọọ, nnọọ wetara, na ize ndụ iji nweta a ọka nke ájá na anya gị; nke a na-nọrọkwa na iyatesịt si lime nakwa. Nke a Nchikota nwere ike mfe ọkọ anya.
The nkịtị-na mix bụ otu ihe ahụ dị ka na mgbe texturing. Otú ọ dị mgbe a edo na-eji ire ụtọ uwe-etinye na n'uko na n'ọnụ na-bee na; a pụrụ iche akụkụ anọ ogbo na a ahụ na-agba ọsọ gafee n'uko na overlapping na okirikiri mezuo iwu. Nke a na-ewe ụfọdụ nkà na-eme ka eme nke ọma.
The n'ozuzu anya bụ a fishscale ụdị ụkpụrụ na n'uko, kaboodu mgbidi, wdg Ọ bụ ezie na retarder na a na-eji; elekọta ga-a ọcha si ogbo juputara mgbe okokụre dị ka ọ bụla plaster na siri ike n'ime ya na-agaghị ekwe ka wepụ.
Stilts na-achọkarị ka plaster kasị uko ụlọ ma ọ bụ na a na-ike dina-na-arụ ọrụ karịa mgbidi. Maka obere uko ụlọ onye nwekwara ike na-arụ ọrụ na mmiri ara ehi crates. The ike nke na-arụ ọrụ isi n'ala na-eme plaster bombs efesasị na ala, mgbidi na ndị mmadụ n'okpuru.
Nke a bụ ihe mere eji ire ụtọ uko ụlọ, na-eji mba retardant mgbe ụfọdụ ọbụna na accelerant, na-mere n'ihu mgbidi. Nkwarụ plaster nwere ike mfe a ga-kpụchasịrị anya a ezigbo plaster mgbidi mgbe udu mmiri. Ọ bụla splatters si a ezigbo n'uko nwere ike mfe a ga-kpụchasịrị anya iferi blueboard ma ọ bụghị site na ihe ugbua techie mgbidi. Care ga-a mgbe guzo n'okpuru gị trowel ma ọ bụ ọzọ plasterer.
The n'ozuzu ike nke na-arụ ọrụ a ezigbo n'uko fetches a elu na-eri. Usoro otu dị ka a ezigbo mgbidi ma na ihe ihere n'akuku maka plasterer.